Suuriya: Shiinaha oo ciidammo gaar ah ku taageeraya Bashar Al-Assad – Kasmo Newspaper
Suuriya: Shiinaha oo ciidammo gaar ah ku taageeraya Bashar Al-Assad
Updated - December 1, 2017 5:28 pm GMT
London (Kasmo), Xukuumadda Shiinaha ayaa ciidammadeeda u diraysa dalka Suuriya si ay gacan u siiyaan xoogagga Madaxweyne Bashar Al-Assad ee dagaalka gabagabada ah kula jira argagixisada. Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa shaaca ka qaadday in 2 cutub oo ciidammada gaarka ah, “Tigers of Siberia” iyo “Night Tigers” loo diri doono Suuriya.
Wargayska The New Arab ayaa Arbacadii 29kii Nofember 2017 qoray in go’aankaas Pekin u qaadatay cabsida isasoo taraysa ee mintidiinta islaamiga ah oo ku soo badanaya Gobolka Xinjiang ee galbeedka Shiina. Gaar ahaan dhaqdhaqaaqa islaamiga ah ee (ETIM) eeTurkistan-ta bari, kuwaas oo u halgamaya madaxbannaanida qowmiyadda Uyghurs oo ah midda ugu weyn islaamka laga tirada badanyahay ee Shiina.
Warbixintii “Country Report on Terrorism” ee Xukuumadda Maraykanka waxaa ku cad in sannadkii 2016 mas’uuliinta Shiinuhu bilaabeen in ay daneeyaan halista Daacish, oo dicaayado afka Shiinaha ku qoran faafisay.
11kii bishii May 2017 Wakaaladda REUTERS waxay baahisay warka in ka badan 5,000 oo Shiineys ka soo jeeda qowmiyadda Uigura kula jiraan Daacish dagaalka Suuriya.
Xukuumadda Shiinaha ayaa hadda ka qabta walaac ku aaddan soo noqoshada “Foreign Fighters”, ka dib jambii argagixisada loogu gaystay Bariga Dhexe, sidaa darteed, waxaa muwaadiniinta Shiina laga mamnuucay in ay u safraan Suuriya, Ciraaq iyo Asiyada Dhexe.
Wargayska “Middle East Monitor” ayaa dhowaan qoray in ayan ahayn markii u horreysay oo Shiinuhu u diro ciidammadiisa dalka Suuriya; sannadkii 2015 Assad wuxuu oggolaaday ciidan 5,000 ah oo Shiinuhu ku jiraan soo galaan Gobolka Latakia.
Shiina, xubinnimadeeda joogtada ah ee Golaha Ammaanka Qarammada Midoobay, waxay marar badan ku garab joogsatay Russiya, sidii loo joojin lahaa qaraarro ka soo horjeeda Rejiimka Suuriya.